Mooshinka Jawaari iyo xaaladda siyaasadeed ee murugsan – Madal Furan
Hoy > Warka > Mooshinka Jawaari iyo xaaladda siyaasadeed ee murugsan
Madal Furan – Waxay u egtahay in siyaasadda Soomaaliya loo rakibay qaab dhismeed markasta ay qasab tahay in uu dhasho khilaaf siyaasadeed oo ragaadiya shaqada ay laamaha ay ka koobantahay dowladda.
Haddaba maxaan ka ognahay khilaafka siyaasadeed ilaa iyo hadda.
Waa Sidee hadda xaalku
Sacuudi Carbiya iyo waddamo kale oo iclaamiyey xiliga bilashada bisha Barakaysan ee Ramadaanka.
DAAWO:- Faysal Cali Waraabe oo Siyaasadii ka tegay Caaqilnimana sheegtay una hanjabay Beesha Garxajis.
DAAWO:- Boqor Buur Madow oo eersaday booqashadii Puntland xabsigana loo taxaabay,